Tsy mandrimandry… Mandritsara : nirotaka ny vahoaka, nodoran’ny olona ny tranon’ireo sinoa | NewsMada
Tsy mandrimandry… Mandritsara : nirotaka ny vahoaka, nodoran’ny olona ny tranon’ireo sinoa
Nanaiky niala moramora tany Mandritsara ihany, taorian’ny fihetseham-bahoaka niafara tamin’ny fandorana ny tranon’izy ireo tany an-toerana ireo sinoa saika hitrandraka harena an-kibon’ny tany. Nimenomenona ary nilaza fa efa nanome volabe sy fiara 4X4 ny mpitondra anefa izy ireo. Mpitondra iza ?Kolikoly avo lenta hafa indray izany.
Tezitra tamin’ny Sinoa mpitrandraka vato any Mandritsara ny mponina any an-toerana, ka nidina an-dalambe ny talata teo. Tsy voatana intsony ny hatezeran’ny olona ka niafara tamin’ny fanimbana fananan’olona. Nodoran’ny mpanao fihetsiketsehana ny tranobe nipetrahan’ny sinoa tany an-toerana. Voatery niditra an-tsehatra ny OMC nandamina ny raharaha tany an-toerana. Rotaka efa saika tsy voafehy intsony teo anoloan’ny hatezeram-bahoaka, saingy voalamina ihany izany rehefa nampiasa hery ny mpitandro filaminana.
Nandamina ny toe-draharaha ihany koa ny manampahefana tany an-toerana, niaraka tamin’ireo sojabe.
Tsy neken’ny fokonolona ny hitrandrahan’ireo Sinoa ny harena ankibon’ny tany tao amin’ny kaominina Ambalakirajy distrikan’i Mandritsara, ka nangatahan’izy ireo ny fialan’ny lehiben’ny distrika any an-toerana. Nivory ny manam-pahefana rehetra tany Manditsara omaly, ka tsy nanaiky ny vahoaka fa nanome 72 ora ny mpitondra fanjakana ny hanalana ireo sinoa mpitrandraka ireo. Ny hariva ihany, nanome baiko an’ireto Sinoa hiala ao an-toerana mba hiverenan’ny fandriampahalemana eo amin’ny mponina ny préfet any an-toerana.
Araka ny vaovao avy any an-toerana, natahotra ireo Sinoa ka niala tany an-toerana, kanefa nimenomenona ireo nilaza fa efa nanome volabe sy fiara 4×4 ny mpitondra talohan’ny nanaovan’izy ireo ny asa. Mpitondra iza no notolorana sy nahazo izany fiara sy volabe nambaran’izy ireo izany ? Milaza ny tsy hanaiky teratany vahiny fa hampiakatra ny raharaha. Niverina nivarotra sy nianatra ny mpianatra any Mandritsara.
Tsy zava-baovao any amin’ny faritra, indrindra any amin’ireo mety hitrandrahana vato ny fisian’ny vahiny manao izany. Anisan’izany ny any Andapa, izay maro ny Sinoa, hatramin’ny karana aza tazana any an-toerana. Fanaon’ireo teratany vahiny ny manome volabe na fiara izay mpitondra eo amin’ny faritra. Karazana kolikoly ataon’ireo tompon’andraikitra sy ny mpitrandraka vato izany, ka izao rotaka izao niafarany. Raha tena miady amin’ny kolikoly ny fanjakana, mbola maro ireo faritra ilàna fanaraha-maso sy andraisana fepetra manerana ny Nosy. Tsy hiandrasana rotaka vao hamono afo.
3 r&eacuteponses à "Tsy mandrimandry… Mandritsara : nirotaka ny vahoaka, nodoran’ny olona ny tranon’ireo sinoa"
Heri Rakoto 27/05/2016 à 21:38
zany no tokony atao ry vahoka a ampy zay KOLIKOLY ANY AMBONY FITIAVANTENA MPITONDRA , ANY SUD ET KO IO
Lefily MG 27/05/2016 à 22:11
Mba fanontaniana ihany : iza marina no nahazo kolikoly ? Ny faritra ve no nahazo kolikoly sa ny fitondrana foibe (faratampony)? Raha nahazo ny aty ambany dia azo antoka ve fa tsy nahazo ny any ambony? … Ny mifamadika @ izay angamba no matetika mitranga … araka ny mahazatra.
raoera 17/06/2016 à 10:19
KOLIKOLY, TSY FANDRIAMPAHALEMANA, MANAO TSINDRI FA LAVO…. izany no hita eto. Deraina ny hetsika nataon’ny vahoaka ao MANDRITSARA, manohitra ny vahiny. Mila sahy mitsivalana amin’izay tapakevitra mamoafady, mamono ny mpiray tanindrazana ny vahoaka. GORINA anie isika e hatramin’ny hena, ny trondro, ny soucril ‘eny e, mba manontania dia hitanao eo), ny …. be dia be e lasan’ny vahiny avokoa. Ambinkambiny sisa ny antsika malagasy. Mba saro piaro amin’ny fananan’ny tena e.
Tsy ny Silamo no atahorana fa ny sinoa (on se trompe d’adve!!!!)